अर्धनग्न बनेर सामाजिक सञ्जालमा किन उत्रिन्छन् नेपाली हिरोइनहरू ? - Dainik Nepal
अर्धनग्न बनेर सामाजिक सञ्जालमा किन उत्रिन्छन् नेपाली हिरोइनहरू ?
दैनिक नेपाल २०७६ साउन ८ गते १२:४७
काठमाडौं । नेपालमा चलेका र केही फिल्मको तयारीमा रहेका हिरोइनहरू पर्दामा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा चल्न थालेका छन् ।
कुनै खास तर्क वा आर्दशका विषयमा नभएर मस्ती गरेका, घुमेका, नुहाएका वा समुद्री तटमा पुगेका तस्बिरका कारण नेपाली हिरोइनहरू चलिरहेका हुन् ।
उनका तस्बिर भाइरल भएपछि प्रत्युत्तरमा उनले लेखेकी थिइन्,‘हात्ती चले बजार, कुत्ता भुके हजार ।’ यो प्रतिक्रियाका कारण पनि उनको चर्चा भयो ।
यस्तै अभिनेत्री केकी अधिकारीका जिम सेन्टरका तस्बिरहरूले सञ्जाल तताए । उनका तस्बिरहरू विभिन्न अनलाइन समाचार पोर्टललगायतले व्यापक बनाएका थिए ।
उता, हङकङमा कार्यक्रमका लागि पुगेकी अभिनेत्री नम्रता सापकोटाको विकिनी तस्बिरले पनि सञ्जाल ततायो । समुद्री तटमा उनी निक्कै मस्ती गरिरहेका तस्बिर सार्वजनिक गर्न उद्दत भइन् ।
केही दिन अघि मात्र अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले स्विमिङ पुलमा नुहाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखिन् । त्यसले पनि बर्षायामको मौसममा सामाजिक सञ्जाल तातो बनायो । उनले पनि खरो प्रतिक्रिया दिँदै लेखिन्,‘अरुको फेसबुकबाट फोटो तानेर कमाई खानेहरू ।’
केही महिनाअघि अभिनेत्री बर्षा राउतको क्लिभेज तस्बिर भाइरल भएको थियो । अस्ट्रेलिया पुगेका बेला उनको त्यो तस्बिर सार्वजनिक भयो । तर, उनले यस विषयमा कुनै खरो प्रतिक्रिया भने दिइनन् ।
मिडियामा चर्चा सेलाउन थालेपछि हिरोइनहरूले यस्तो जुक्ति गर्दै आएको धेरैको बुझाई छ । मिडियाबाट पनि हराउन थालेपछि चर्चा कम हुने र कामका लागि कसैको दृष्टि पर्न नसक्ने आँकलनका आधारमा हिरोइनहरू यस्तो हर्कतमा उत्रिन्छन् ।
एक निर्माता भन्छन्,‘यो हलिउड र बलिउडका अभिनेत्रीहरूको सिको पनि हो । जसका कारण चर्चामा रहन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा पलाउँछ ।’
त्यसो त पर्दामा तत्काल आउने कुनै लालसा नभएका अभिनेत्री पनि सञ्जालमा भने सक्रिय रहेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण हुन् बिहे गरी बेल्जियमतिर बसेकी अभिनेत्री, गरिमा पन्त । पन्त इन्स्टाग्राममा अर्धनग्न तस्बिर राख्ने पहिलो सूचीमा पर्न थालेकी छन् ।
‘प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष हिसाबले पनि आफ्नो चर्चा कम नहोस् भन्ने ठानेर हिरोइनहरूको यस्तो काम जारी रहेको हुनसक्छ’, एक निर्देशक बताउँछन् ।